अब सबै नेपाली युवती बन्न सक्छन् आदर्श बुहारी, विश्वविद्यालयमा बुहारी बन्ने पढाइ सुरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अब सबै नेपाली युवती बन्न सक्छन् आदर्श बुहारी, विश्वविद्यालयमा बुहारी बन्ने पढाइ सुरु
काठमाडौं। हरेक मातापिताले आफ्नो छोराको बिहे गर्दा एक आदर्श बुहारीको आशा गरेका हुन्छन् । र, हरेक युवती पनि विवाह गरेर श्रीमानको घर गएपछि आदर्श बुहारी बन्न चाहन्छन् । तर, दुवै पक्षको कुरा नमिल्दा अभिभावकले अपेक्षा गरेअनुसार आदर्श बुहारी नपाउने वा नवविवाहिता पनि आदर्श बुहारी बन्न नसक्ने समस्या हाम्रो देशमा छ । अब भने यो समस्याबाट छुटकारा पाइने भएको छ । एक विश्वविद्यालयले आदर्श बुहारी बनाउने पढाइ सुरु गरेको छ ।
खास कुरा त के भने यो विश्वविद्यालयमा आदर्श बुहारीको कोर्सबाट नेपाली युवतीहरु सजिलै लाभान्वित हुन सक्छन् किनकि यो विश्वविद्यालय नेपालबाट धेरै नजिक छ । छिमेकी देश भारतको बिहार राज्यमा रहेको बरकतुउल्लाह विश्वविद्यालयले आदर्श बुहारीको लागि ३ महिनाको कोर्स सुरु गरेको छ । नेपाल र भारतको संस्कृतिसमेत लगभग मिल्दोजुल्दो भएको र पछिल्लो समय नेपालको संस्कृति भारतीय संस्कृतिबाट प्रभावित रहेकोले यो कोर्स नेपालको लागि पनि उपयुक्त हुनेछ । यो कार्स ३ महिनासम्म पूरै पढ्ने युवती आदर्श बुहारी बन्न सक्ने विश्वविद्यालयको दावी छ । विश्वविद्यालयले त यो कोर्स महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा अघिल्लो कदम भएको समेत बताएको छ ।
३ महिनाको यो कोर्स यसै शैक्षिक सत्रदेखि सुरु हुनेछ । विश्वविद्यालयका कुलपति प्रोफेसर डिसी गुप्ताका अनुसार यो कोर्सको उद्देश्य युवतीहरुलाई जागरुक गर्नु हो जसबाट उनीहरुले नयाँ माहोलमा आफूलाई सजिलैसँग ढाल्न सकुन् । विश्वविद्यालयको नाताले समाजप्रति आफ्नो केही कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै गुप्ताले भने ‘हाम्रो उद्देश्य यस्ता बेहुली तयार गर्नु हो जसले २ परिवारलाई जोडेर राख्न सकुन् ।’ यो कोर्स मनोविज्ञान, समाजास्त्र र शिक्षा विभागको संयुक्त परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।